Ketchup ရဲ့ September Promotion လေးလာပါပြီ ? Ketchup Matte Liquid Lipstick အချောင်း ၂၀ ဝယ်ယူသူတိုင်း ပုံမှန် FOC Lipstick ၂ ချောင်း အပြင် Ketchup Bubble MakeUp Cleaning Tissue (100 Sheets) အထုပ်ကြီး ၁ ထုပ် ထပ်မံ ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးပါ…. Promotion ကတော့ ဒီ September လ တစ်လထဲဖြစ်လို့ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့နော် ??? Ketchup Matte Liquid Lipstick နှင့် Ketchup Bubble MakeUp Cleaning Tissue တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်
Ketchup Lipstick No.5 Burger ??? အရောင်ထွက်မှန်ကန်စေရမယ်. နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ်. ဆိုးပြီးဖျက်လိုက်ချိန်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး. လိမ်းပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို Treatment ပေးပြီး အလှပဆုံး အရောင်ထွက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်.
Ketchup Lipstick No.4 BBQ ??? အရောင်ထွက်မှန်ကန်စေရမယ်. နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ်. ဆိုးပြီးဖျက်လိုက်ချိန်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး. လိမ်းပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို Treatment ပေးပြီး အလှပဆုံး အရောင်ထွက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်.
Ketchup Lipstick No.2 Pasta ??? အရောင်ထွက်မှန်ကန်စေရမယ်. နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ်. ဆိုးပြီးဖျက်လိုက်ချိန်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး. လိမ်းပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို Treatment ပေးပြီး အလှပဆုံး အရောင်ထွက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်.
Ketchup Lipstick No.1 Chocolate ??? အရောင်ထွက်မှန်ကန်စေရမယ်. နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ကာကွယ်ပေးမယ်. ဆိုးပြီးဖျက်လိုက်ချိန်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းသား ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းမနေစေဘူး. လိမ်းပြီးတာနဲ့ နှုတ်ခမ်းကို Treatment ပေးပြီး အလှပဆုံး အရောင်ထွက်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်. တစ်ချောင်း ၈၅၀၀ ကျပ်.